Iprogram yama-Software, isihloko esingapheliyo-i-Geofumadas
I-piracy ye-Software, ingxaki engapheliyo
NgoJanuwari, 2012 Internet kunye neBlogs, egeomates My
Ngaloo mihla i Umthetho weSOPA Kuye kwathatha isicatshulwa, kulukhuni ukulimaza iingxaki kunye nombango wobude bempahla yengqondo kunye nawaphi amalungelo omntu wobumfihlo okanye ulawulo lolwazi oluhlangeneyo luqala.
Kungenzeka ukuba isizukulwana esingaphantsi kweminyaka ye-20 into ebakhathazayo kakhulu kukuba i-Facebook iya kuvala iprofayili yabo, kwaye abanye abanakuhamba okanye bafike. Kodwa xa uvala iziganeko ze-intanethi njenge-Facebook, i-Google, i-Wikipedia esongela ukuvelisa umsila wokubhikisha ... ngoko sizama ukuzama ukuba yiziphi iinwele ze-SOPA.
Ngokuqhelekileyo, akukho mntu unokungabaza ukuba ukusetyenziswa okungekho mthethweni kweenkqubo okanye umculo obiza umntu ukuba akhiqize ubugebengu bamnyama namhlophe. Ndiyakhumbula isibindi esandinayo xa utitshala wandibuza ukuba ndimgunyaze ukuba asebenzise incwadi endikubhala njengombhalo weklasi kwimixholo yokubhala; Ndaziva ndihloniphekile kangangokuba ayizange ifanele xa wamenywa ukuba ndibe nenkulumo kwenye yeseshoni zakhe. Ke lonke uvuyo lwam weza a phantsi xa ndabona ukuba bonke abafundi babe iqela sheets ezifotiweyo, nto leyo wathengisa unjingalwazi US $ 1.20, kunokuba yokukhuthaza ukuthenga mnye kwivenkile ukuba nje ehamba $ 3. Akazange achithe ezintlanu kwiifotokopi ngoba inkonzo yayisenalo.
I wanikela intetho yam, Ndamchazela ubhale ukuwaprinta mihla sisenzo kuyanda, mna wabakhuthaza ukuba ukuphumeza indlela yabo yokubhala yaye ndemka abafuna ukufumana imela uqhoqhoqho xibilili zam. Ewe, ndiyonyanya, andizange ndiwuqedile isenzo kuba emnyango umfundi wandibuza ukuba iifomograph ze-XD ikopi. Xa akhawunti phakathi abafundi bayo utitshala 25 brokered iidola 30, mna andizange ubona penny kuba nkqu ikopi ukuba linikwa ukuzahlulela ngokweemvakalelo wanikwa ...
Ukwenza izinto zibe zibi nakakhulu, abafundi babehlawula ikhosi yabo yokubhala ecaleni kweedola ze-140. Ndiyathetha, kuba loo mali yayingayithenga ngokulula incwadi eyayingena kwiidola ze-3 ...
Ewe, isiphelo sale ndaba yothando kunye nexhalakisayo iyafana naleyo elandela abo bavelisa umxholo wabo, obangela ixesha, imali kunye nolwazi ngokukodwa. Akungalungi ukuba umntu eze, cela ukuba ikopiwe kumlingane wakho kwaye uphakamise phezulu ukuya kwi-Megaupload yokukhuphela mahala.
Ndiyicinga ngokunyanisekileyo ukuba ngubani ongenayo imali yokuthenga i-ArcGIS, kufuneka athengwe GIS asibonise exabiso elingaphantsi kweedola ze-300 kwaye ihlawulwa ngomsebenzi wokuqala wokuqala ohlawulweyo, ukuba awunayo loo nto ke I-GUM ye-Quantum o GvSIG owenza okufanayo Ishishini alikho kwisofthiwe kodwa sikwazi ukuvelisa iinkonzo ngolwazi oluye lwafunyanwa.
Umzobo ndibonakalisa ungaphantsi kokufa. Kubonisa ukuba kunzima kangakanani ukunciphisa ukusetyenziswa kwesofthiwe engekho mthethweni kumazwe asakhulayo.
Jonga indlela eLatin America eChile ephuma ngayo "nje" i-62% yeprojekthi efakwe kwi-2010, iyancishiswa ukusuka kwi-68% kwiminyaka ye-5; Ngokufanayo, inkqubela yeColombia neBrazil iyamkeleka. Ndiyamkeleka kakhulu nangona ezimbini zeenombolo ze-5 ze-NOD32 (ezixabisa iidola ze-40) zingekho mthethweni.
Nangona iVenezuela kunokuba yinciphise iphuma kwi-86% ukuya kwi-88%; oko kuthetha ukuba kwilayisenisi nganye ye-10 AutoCAD ekhoyo kweli lizwe, yodwa yinto esemthethweni. Ikoyikeka nje yenkampani efuna ukutyalo ekuphuhliseni isoftware, kwaye nangona imizamo yelizwe kwikhosi esezantsi ukufuduka kwiprosoft yefayili.
Kwimeko ka-Europe West, le imbi kakhulu Iceland, apho has a 49%, Spain / Portugal punks 40%, nto leyo esele ngaphantsi kodwa emangalisa Kwiimeko ezinjengezi Austria nge% nje 24 ayifanelwe ekususeni Luxembourg (20%) ngenxa yecandelo lobungakanani balo kodwa ubuyisela ekuqwalaseleni ukuba iipesenti ezifikelelwe ngamazwe afana ne-United States neJapan.
Kulabo bafuna ukubona umbhalo opheleleyo opapashwe ngo-Meyi we-2011, kunye namanani avela kuwo onke amazwe, kuquka iimephu ukuyijonga ihlaba, unokukubona kwesi sixhobo:
I-BSA yintsebenziswano apho iinkampani ezibaluleke kakhulu ekuphuhlisweni kwesoftware zidibeneyo, phakathi kwazo iBentley Systems, AutoDesk, Works Solid, Apple, Corel kunye ne-Adobe.
Ngoko ukuba ukusetyenziswa kakubi kwesoftware kuyakuqwalaselwa, kuya kuba ngcono ukuba amazwe afake iinkampani kunye nabaqeqeshi ukuba banikele iinkonzo eziphezulu, kuquka ukuhlonipha amalungelo abo; kunye nethemba lokuba ilungelo lihlonishwa kubo ngoyilo kunye neeplani ezichazayo. Bika ubugqwetha kukuxhasa iinkqubo ngamnye.
Icala elibi lomthetho we-SOPA yinqanaba eliphezulu lokulawula elingagqitywa ngokwemiqathango yamalungelo ngamnye. Ukunika umzekelo:
Inkwenkwe ibeka iblogi kwi-Blogger, kwaye kulo mnye ucaphula indawo apho unokukhuphela khona iinkqubo ezingekho mthethweni. Umthetho wawuza kugunyazisa i-Google kungekhona nje ukutyhila idatha kunye neefowunelwa zale akhawunti, kodwa i-Google Blogs (ngaphambi kweBlogger) ingavalwa ngokupheleleyo.
Ukuba kwimeko yenkwenkwe engenamacala eyenza ngenjongo, kodwa cinga kwiiforam, apho abaninzi bathi, umbuzo, ukucebisa, ukugxeka okanye ukudibanisa. Ezi zithuba ngoku zidlala indima ebalulekileyo kwidemokhrasi yolwazi (GabrielOrtiz.com kunye neCartesia.org ukunika imizekelo). Ngenxa yokungabi namandla kumodareyitha yomxholo, umnini wesayithi unokulahlekelwa ilungelo kwi-domain yakhe, kumxholo wakhe, kwiakhawunti yakhe ye-Paypal kunye nakwi-imeyile yakhe ukuba uphantsi kwesizinda esisodwa.
Ndiyazi, ukugqithisa into kwaye kuya kuba kukusetyenziswa kakubi ... kodwa ihlabathi lizele ukusetyenziswa kakubi xa kufikelele kwimfuno enkulu kwezoqoqosho. Kwakungenelisekile ukunyanzelisa abo bakhuthaza oku ukwenzela ukuba amazwe alandele izikhokelo zabo phantsi kwentlungu yokuchaphazeleka kwezoqoqosho; Efana nendlela kwamanye amazwe iinkampani zabucala iqabane ku tirhisa urhulumente amawaka eerandi kwiinkqubo ayazi noyena nabezopolitiko kukhonza ... kodwa ke imicimbi sele lomtshato Nakuba njengoko amayelenqe lolungiso njengoko lo mfo lowo uthengisa i-20 yezigidi Iikopi ezingekho mthethweni ze-AutoCAD kwi-BuyUSA.com.
Enye ingxaki inokuthi ihlaselwe yile nkampani inokwenza ngokusekelwe kweli lungelo kumanyathelo ahlangeneyo njengeFree Software. Nangona kunjalo kude ke kukha niyigqibe ukuba ukusebenzisana evuma ukunqongophala umgangatho, kunye nenani labameli (eliqela BSA ngamalungu loo okusingqongileyo) akwazi ukubonisa ukuba i-Open Source iinzame zezoshishino enogonyamelo ngamnye. Cosillas e Umthombo ovukileyo kufuneka uqaphele, kuba ezandleni zakho mveliso yengqondo ezifanele izigidi, kodwa akusiyo na umntu kodwa zonke, kwaye akukho mntu unokuzikhusela ukuba olunye usuku luvala umthombo weminikelo, indawo yokuhlala okanye nokuba ngumthombo wezimali.
Nangona konke kwenzeka, kufuneka usebenzise isofthiwe yomthetho kwiinkampani zethu (okulungileyo kuwo wonke umntu); senza ibhiziniselwano ngamakhono asinika yona. Ukuba awuyi kunika ngaphezulu, kukho iinkqubo eziphantsi kweendleko okanye ilayisenisi yamahhala.
Futhi ulinde umntu ukuba aphakamise i-Open Source hardware, ngoko umntu ngamnye alanda i -ododite kwi-intanethi ukwenza iimilinganiselo zabo ngelixa abhalisa njengezimeleyo.
Post edlulileyo«Edlulileyo I-LibreCAD, ekugqibeleni siya kuba ne-CAD yamahhala
Post Next I-Plex.Earth yokukhuphela imifanekiso esuka kwiGoogle Earth Ngaba akukho mthethweni?Okulandelayo "